» मनोरोगी समाज-कथा
२०७६ आश्विन ११,शनिबार १०:२५
–सिएम रिमाल ।
‘आमा, मलाई कुरकुरे किनिदिनु न । नत्र म स्कुलै जान्नँ ।’ सुदिन ब्याग बोक्दैआमालाई भन्छ । सुदिन अचेल स्कुल जानेबेलामा आनाकानी गर्ने गर्छ । ‘केको कुरकुरे, यहाँ तरकारी किन्ने पैसा छैन । तँलाई कुरकुरे चाहिने । छैन आज । भोलि किनिदिउँला । तैँले खाने कुरकुरेमा,शरीरलाई चाहिने अत्यावश्यक कुराहरु जस्तै फाइबर, भिटामिन, मिनरल्स आदिको कमी हुन्छ अनि तँ विरामी हुन्छस् । त्यसैले,घरमै बनाएको खानेकुराहरु खा । तँलाई मिठो लाग्यो भन्दैमा हुन्छ र ?’आमा भाँडा माझ्दै भन्छिन् । ‘अँ हाम्रो साथीले त दिनदिनै विद्यालयमा ल्याउँछ । सरहरुले केही भन्नुहुँदैन । तपाईंचाहिँ मलाई उल्टै गाली गर्नुहुन्छ ।’ सुदिन कड्किन्छ ।
‘उनीहरुसँग त धेरै पैसा छ नि । उनीहरु विरामी भएपनि भोलि उपचार गर्ने पैसा हुन्छ । ठूलाबडाले जे गरेपनि हुन्छ क्या ।’ आमा सम्झाउन खोज्दै छिन् । ‘त्यसो भनेर हुँदैन । मलाई जसरी पनि चाहिन्छ । साथीहरुले आज कुरकुरे ल्याएन भने सँगै नबसाउने भनेका छन् ।’
के गर्ने अब ? खोई कुरकुरे ल्याइस् त भनेर साथीहरुले सोधे भने के जवाफ दिने होला ? साथीसँग बस्न पाइएन भने कसले राख्ला मलाई ? बाटोमा सोच्दै विद्यालय तर्फ लाग्छ ।
‘सुदिन, ए सुदिन’ बाटामा स्कुल जाँदै गरेकी सुनिमाले के बोलाएकी मात्र थिई । ‘पर्दैन बोल्न यस्तो गरिबहरुसँग । अनि हाम्रो स्तर पनि मिल्दैन चुप लागेर हिँड छोरी ।‘सुनिमाकी आमा बिचैमा बोल्छिन् ।
‘मेरो कक्षाको मिल्ने साथी हो नि । ऊ र मसँगै बस्छौँ । उसले मलाई हिसाब नआएको बेलामा सिकाइदिन्छ । जोसुकै होस् ।’ छोरी फकाउन खोज्दै छिन् । ‘जे गरोस् । जसो गरोस् । त्योमलाई मतलब भएन तर तँ अबदेखि सँगै बस्ने होइन नि त्यस्तोसँग ।
‘मेरो जन्म कस्तोको कोखमा भएको होला ? म पनि सम्पन्नको घरमा जन्मन पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? जे भन्यो त्यही किनिदिनु हुन्थ्यो । अलि ठूलो कक्षामा गएपछि मोबाइल पनि पाइन्थ्यो । विद्यालय पनि भनेजति पैसा लान पाइन्थ्यो अनि जे खाए पनि हुन्थ्यो । हे प्रभु, मलाई अर्को जुनीमा धनीको कोखमा जन्म गराइदेऊ ।’सुदिनको मनमायस्तै खेलिरहेको थियो ।
ल्याइस् त ? विद्यालय पुग्न नपाउँदै एउटा साथीको मुखबाट फुस्किहाल्यो ।
‘केको ल्याउनु नि, आमाले झन्डै घरबाट निकालिदिनुभएको ।’ टाउको निहु¥याउँदै सुदिनको बल्ल बल्ल जवाफ दिन्छ । गुड मर्निङ मिस । सबै ज¥याकजुरुक उठ्छन् । त्यतिनै खेर कक्षामा मिसको प्रवेश हुन्छ । ‘सुदिन, तँ पछाडि गएर बस् ? तल्लोस्तरको भएर पनि अगाडि भाग खोज्ने ? पछाडि जा ।’ शिक्षित भनाउँदी मिसको मुखबाट निस्किहाल्छ ।
सुदिन लुरुक्क पर्दै पछाडि जान्छ । सबैको आँखा उसकै अनुहारमा जान्छ । सुनिमा पनि न्याउरो मुख पार्दै बाध्य हुन्छिन् हेर्नलाई । सुदिन र सुनिमाको आँखा जुधेको जुधै हुन्छ ।
शिक्षक बालकको शिक्षाको एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सक्रिय तथा औपचारिक साधन हो । जसरी बालकको शिक्षामा परिवारले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ भने शिक्षकले गहिरो प्रभाव। ऊ समूहका कार्यमा सक्रिय भएर भाग लिनसक्ने योग्य व्यक्ति बन्छ्र । ठूलाबडाको भनाई छ कि, प्रत्येक बालक त्यही बन्छ जुन शिक्षकले बनाउन चाहन्छ । वास्तविक के हो भने, बालकको जन्म केवल पारिवारिक वातावरणमा मात्र विकसित हुँदैन उसको विकासमा शिक्षक र विद्यालयको पनि गहिरो प्रभाव हुन्छ । शिक्षकको चमत्कारनै हो कि जहाँ बालकको प्रवृति, विचारधारा तथा आदतको निर्माण हुन्छ साथै उसको संस्कृति, रहनसहन तथा भाषाको र उसको भविष्यको एउटा अमीट छाप पनि देखिन्छ्र ।
‘आमा आमा, मलाई आज मिसले पछाडि राखिदिनु भयो नि ।’ सुदिन घर पुग्नासाथ सुनाउँछ ।
‘यस्तै हो गरिबले बाच्न नपाउने दिन आयो जस्तो छ । ठूलाबडाले जे भने त्यही गर्नुपर्छ हामीजस्ताले । त्यही भएर चुप लाग् छोरा नरो ।’ आमाले मन बुझउँदै भन्छिन् ।
‘मैले अटो चलाउन थालेको पनि सात वर्ष भएछ । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि पेटै पाल्न र तेरा लागि शिक्षा प्रदान गर्न अटो किस्तामा किनेर चलाउन थालेकी हुँ । सुरुमा त रिक्सावालाहरुले यात्रु कुर्ने स्थान नजिकैबाट यात्रु चढाउनै दिँदैनथे । अरु अटोवालाहरुले पनि मेरो उत्तिकै रिस गर्दथे । यात्रुहरुको रोजाइका कारण मात्र मैलेदिनको आम्दानी राम्रै गरेकी थिएँ । तैपनि कहिलेकाहीं बाटो छेकेर मान्छे ओराली दिनेसम्म गर्थे । त्यस्तो बेला कहिलेकाहीं झगडासमेत हुने गरेको थियो । एक दिन एकजना यात्रु मेरो अटोमा चढ्यो । रिक्सावाला दाई उसकोमा यात्रु चढेन भनेर मेरो अटोको पछाडि झुन्डिएको झुन्डिएै गरेर बसे । म अटोबाट झरेँ । अनि एक झापड हानेँ,’ पुराना दिनको घटना सम्झदै सहिनाले सुदिनलाई भन्दै थिइन् ।
केही नगरी बस्दा बुबाले कति खेर कमाएर ल्याउलान् र खाउँला भनी बस्नुपथ्र्याे, मलाई । त्यति मात्र होइन, तिमीहरुले केही पैसा वा कापी कलम माग्दा पनि बाबाले ल्याएपछि दिउँला भन्नुपर्दथ्यो मलाई । मसँग पैसा छैन भन्दा तिमीहरुको अनुहार पनि कालो बादलले ढाकेझैं पाथ्र्यौ। कति दिन माग्ने ? त्यही भएर पनि मैले आफैँले अटो चलाउन थालेकी हुँ ।
आमा–छोराकै आँखाभरि टिलपिल पानी पोखरीझैं भए । अवाक भयो सुदिन । केही बोल्नै सकेन । ग्वाम्लाङग अङ्गालो हाल्यो र डाको छोडी रुन थाल्यो ।
‘अझै सुन । त्यसपछि के भयो थाहा छ । झगडा चाहिँ यात्रु तानातानमा बढी हुन्थ्यो । झगडा पर्दा केटाहरुले नराम्रो बोलिदिन्थे । उनीहरुले प्रयोग गर्ने शब्दहरु कसरी भन्नु ? त्यही भएर एक कानले सुन्यो अर्को कानले उडाउनुपर्ने हुन्थ्यो । म वास्तै गर्दिनँथेँ । अटोको स्टेशन नभएकै कारण ट्राफिकले खेदाउने र कतिपय अवस्थामा पैसा लिने पनि गरेका थिए । हाम्रो हकमा ट्राफिकले अपमान गर्ने गरेकाथिए । एक दिन म अटो रोकेर बसेको बेला एक ट्राफिक प्रहरीले नराम्रो व्यवहार गरे । त्यसपछि मैले सिधँै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी गरेँ ।उसले कारवाही ग¥यो कि गरेन थाहा भएन पछि ।
खाडी मुलुक गएर महिनाको २० हजार कमाउनुभन्दा त आफ्नै देशमा काम गरेर कमाउनु राम्रो हो नि छोरा । त्यतिखेर मलाई यो त पोइला जान्छे, केटाहरु ल्याउँछे भन्थे । यसो भनेको सुन्दा चित्त दुख्थ्यो । जे जे भनेपनि काम गर्छु भनेर सुरु गरेँ । मैले त्यतीखेर नै हो नोटको मेरुदण्ड छोएको, त्यसको नसा नसा छामेको, त्यस नसामा बग्दै गरेको रातो र नीलो रगत देखेको, त्यसमा मेरा खाना र खेल दुवै संलग्न भएका । त्यसमा सम्पूर्ण कर्म, पुरै गृहस्थी, सारा जयपराजय, दिन र रातहरू समावेश भएका । मलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि आफैंलाई भने त्यसबाट बचाउनु थियो । मैले त्यसलाई कपडाजस्तै फैलाएँ र हेर्न खोजें कि त्यो मेरो आत्माको पोशाक बन्न सक्ला ? अनि आफ्नो लयलाई छोडिनँ ।’ विचविचमा आँखाबाट आँसु पुछ्थिन्।
‘पहिलाको तुलनामा विभेद र हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने भएपनि महिलाहरुले आफूले अङ्गालेको पेसा निर्धक्क र सुरक्षित साथ गर्न सक्ने वातावरण निर्माण भईनसकेको थियो । यो समस्या सबैतिर रहेको छ । त्यही भएर छोरा केही हिम्मत हार्नुहुँदैन । तँ पढ्दै जा । म जसरी पनि तँलाई पढाउँछु ।’ आमा ढाँडस दिँदै छोरालाई सम्झाउछिन ।
समयानुसार वसन्तले आफ्नो पछ्यौरा ओढाएकी हुन्छिन् । हरियालीले कसैलाई पनि छोडेको छैन । कोइलीले आफ्ना दुःखका दिन सकिए भन्ने गीतले पातहरुलाई लठ्याइरहेको छ । हर्ष, उमङ्ग खुसी बाट्दै हुन्छ लालीगुँरासले । हिमालले पनि दन्त लहर देखाउँदै गिज्याइरहेको हुन्छ त्यसैले हेर् छोरा हामी गरिब जातका मान्छे उनीहरु धनी हुन् । हामी जस्ता मान्छेलाई यो संसारमा स्वतन्त्र भएर चराजस्तै उड्न र बाच्न साह्रै कठीन छ । त्यसैले तँैले आफूभन्दा धनीहरुको सङ्गत नै नगर । उनीहरुसँगै नबस्नू । सँगै खाजा नखानू । सँगै नहिँड्नू । यदि त्यसो गरिनस् भने उनीहरुले तँलाई गाली गर्छन्, हेप्छन्, पिट्छन् । एकदिन अवश्य उनीहरु हाम्रो पाउ पर्न आउँनेछन् ।के गर्नु गरिबको घरमा तेरो बास भयो । आमाको मलिन आवाज आउँछ ।
हुन्छ आमा, म हजुरले भने जस्तै गर्छु , हजुरको मन कहिल्यै रुवाउँदिनँ ।जा गएर पढ् । म एउटा काम सकेर आउँछु । ऊ पढ्न कोठामा छिर्छ ।हे भगवान् , तिम्ले नै यो संसारका सबै प्राणीका सृष्टि गरेका हौँ । तर, आज मैले तिम्रो दर्शन गरेँ भने मानव जातिको कल्याण हुन्छ । दुःखको महासागरबाट प्राणी जगत्ले मुक्ति पाउँछन् भनेर मैले आराधना गर्ने गरेको छु । पूजाअर्चना गर्न सधैँ तत्पर रहन्छु । तिम्रो सृष्टि अपरम्पार छ तर मेरो सृष्टि कस्तो सृष्टि आपैmँमा अभिषाप । मैले तिम्रो दर्शन गर्न पाइनँ ।बिहानको त्यस्तै सातजति बजेको हुँदो हो ।
आँगनमा उभिएर ढोकातिर हेर्दै बशुधाले बोलाइन् – सहिना, ए सहिना । भित्र कोही छैन कि क्या हो ?बाहिर निस्किएर सुकुल ओछ्याउँदै सहिनाले भनिन् । ए ,बजै पो आउनुभएछ बस्नुहोस् न । के कामले आउनुभयो होला हाम्रो घरमा?म आफैँ आउथेँ नि खबर पठाउनुभएको भए । सुकुलमा बस्दै बशुधाले भनिन् । के गर्नु कत्ति दुःख दिनु भनेर म आफैँ आएको । तेरो घरमा आटोपिठो छैन होला भनेर । सुदिन विरामी सुनेर आएकी। औषधी किन्ने पैसा छैन कि भनेर । ला, यति लि राख् , कमाएपछि तिर्लिस् । ओहो !बजै त चन्द्रमाजस्तै पो हुनुहुँदोरहेछ । के खोज्छस् कानो आँखा भैगो । चन्द्रमाजस्तै शीतलता दिनै तपाईं त साक्षत देवी नै हुनुहुन्छ ।आँखाभरि खुसीको आँसु पार्दै सहिनाले पुनः कुरा थपिन् ।
साँच्ची ,मेरो सुदिन ठूलो भएको भए उसको बाबु मर्नु हुँदैनथ्यो नि है । सहिनाको आँखा एक्कासि रसाउँछ । जे नहुनु थियो त्यो भैसक्यो अब विगतलाई सम्झेर हुन्छ र ? नरो हामी छौँ । तेरो दुःख अवश्य एकदिन भगवान्ले देख्ने छन् । नआत्ति । केही हुँदैन । बरु सुदिनलाई झट्टै अस्पताल लैजाऔँ । बशुधाले आड दिँदै भनिन् ।
केही समयपछि एक दिन सुनिमा कक्षामा झोक्रिएर बसिरहेकी थिइन् । कक्षामा नेपाली सर आउनुभयो । सबैजना उठे तर उनी उठिनन् । सँगै बसेकी साथीले चिमोटेपछि झसङ्ग भएर उठिन् । सरले हाजिर गर्न थाल्नुभयो, रोल नं. १, रोल नं. २,………..रोल नं. २९‘……….कोही बोलेनन् । रोल नं. १…..आज सुनिमा आएकी छैनन् हो ? सरको प्रश्न सुनेर सुनिमा झसङ्ग भइन् । जुरुक्क उठिन् र भनिन् । सरी सर‘‘।हाजिरी सकिएपछि सरले सोध्नुभयो, ‘होइन आज तिमीलाई के भयो ? के सोचमा डुबेकी छ्यौ ?
सुिनमाले रुन्चे स्वरमा भनिन्, ‘बुबा आमाले मेरो मिल्ने साथी सुदिनसँग नबस्नू, नखानू, सँगै नहिँड्नू भन्नभएको छ । किन नि ? सरले हत्तनपत्त अर्को प्रश्न गरिहाल्नु भयो ।
सरको प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिइन् – हामी ठूला अरे, धनी अरे, हामीसँग उनीहरुको स्तर मिल्दैन अरे । साथी भनेको जातभात, रङ, धर्म, थर, पेसा, वर्णका आधारमा हुँदैन, हुन्छ त केबल भावनामा मात्र । तिमी पढ्नमा अलि कमजोर पनि छ्यौ । तिमीलाई उसले नआएको बेला सिकाइदिन्छ पनि त्यसैले बुबाआमाको कुरा छाडिदेऊ । सरले सम्झाउन खोज्दैम तिम्रो घर एकदिन आएर आमाबुबालाई सम्झाउँछु भन्नुभयो । सुनिमाले खुसी हुँदै भनिन्, हुन्छ सर तर झट्टै आउनुहोला नि ।
सबै आ–आफ्नो घरतिर लाग्छन् । घर पुग्नासाथ सुदिनले ढोकाबाटै –
जूनभन्दा राम्री मेरी आमा
फुलभन्दा राम्री मेरी आमा
सबैको मन बुझिदिने मेरी आमा
दुःख बिर्सिदिने मेरी आमा
सुदिन के भयो आज ? खुसी हुँदै आएको छस् त ? आमा हाँस्दै सोध्छिन् । त्यतिनै खेर बाहिरबाट सहिना,ए सहिना कता हो ? हत्तनपत्त खुसीको आँसु पुछ्दै सहिना…। हजुर, म यतै छु । झट्टै मलाई अस्पताल जानुथ्यो । अटो खाली छ कि नाई तेरो ? पल्लो घरकी सुनिमाकी आमा अत्तालिँदै आउँछिन् । किन र के भयो हजुर ? तँलाई जे भएपनि पैसा चाहिएको हैन र ?
पहाडै खसेजस्तो हुन्छ सहिनालाई । कालो बादलले नछोपेको कहाँ हो र तैपनि मन सम्हाल्छिन् । गिद्धले मरेको सिनो लुछेझैं लुछ्न पल्केका यी शोषकहरु । अर्काको मासु नखाई निद्रा पनि पर्दैन होला । जुकाभैm गरिबको रगत नचुसी त ढाँढिदा पनि ढाढिँदैनन् अनि त्यति मात्र हो र । मनमनै सहिना भुत्भुताउँछिन् ।
त्यसो नभन्नू न । पैसा नै सबथोक होइन नि हजुर ।घरमा धन नभए पनि मनको धनी हुन्छौँ हामी गरिब । आँखाभरि आँसु पार्दै जवाफ दिन्छिन् सहिनाले । ल झट्टै आऊ है त, हामी तयारी भएर बस्छौँ । हुन्छ हुन्छ । म झट्टै आउँछु । भित्रैबाट मन्जुरी जनाउँछिन् ।
बाबु, मैले खाना पकाएर राखिदिएको छु खाएर समयमै विद्यालय जानू है । म यसो टिप हान्न हिँडेँ । हुन्छ, आमा म जान्छु । भित्रैबाट सुदिनले स्वीकार जनाउँछ ।
त्यसको केही बेरमै सुदिनलाई अस्पतालबाट फोन आउँछ र ऊ हतार हतार पुग्छ । अस्पताल पुग्दा त सुनिमाकी आमा रगतको अभावले छट्पटाइरहेकी थिइन् । अन्तमा सुनिमाको आमालाई त्यही सुदिनको रगतले ज्यान बचायो ।
बद्री पंगेनीले यस्तो गीत गाउँदा आमाहरुको रुवाबासी चल्यो !
रेखा लडेको भिडियो भयो भाइरल (भिडियोसहित)
ज्योति मगरको नाचले महोत्सवमा लाठीचार्ज, पाँच जना पुगे प्रहरी खोर
चर्चित अभिनेत्री तापसीलाई ‘थप्पड’को शुटिङपछि वास्तविक जीवनमा फर्किन ३० दिन लाग्यो
यी हुन् पहिलो डेटमै फिदा पार्ने छ उपाय